Installing Zawgyi font without losing original Myanmar unicode in Sony Xperia Devices - MYSTERY ZILLION
Installing Zawgyi font without losing original Myanmar unicode in Sony Xperia Devices
May I know that is there any ways to install both mm unicode and zawgyi fonts in Sony Xperia devices running android version 4.4.4. Thank you.
ကျွန်တော် သိသလောက်ကတော့ မရဘူးခဗျ။
Z series တွေကိုတော့ showroom ကလုပ်ပေးတယ်။ C series တွေကတော့ လံုးဝမရသေးဘူး။
ကျန် series တွေတော့ မသိဘူး။
၂ ခု​လုံး​ပြိုင်​တူ​မြင်​ရ​ဖို့​တော့ မ​ဖြစ်​နိူင်​ဘူး။ကျွန်တော်​တော့​ဒီ​လို​လုပ်​ထား​တယ်​ဗျ။system font ကို ယူ​နီ ထား⁠ထား​တယ်။အသုံး​များ​တဲ့ viber,facebook ကို ဇော်ဂျီ​ထား​လိုက်​တယ်။ဘယ်​လို​လုပ်​လဲဆို​တော့ root access တော့​ရှိ​ဖို့​လို​တယ်​ဗျ။iFont latest version ကို install ထား​ပြီး app တစ်​ခု​ချင်း​စီ​အလိုက် font ပြောင်း​ပေး​ထား​လိုက်​တာ​ပါ​ပဲ။